CloudOn: Office amin'ny iPad misy mpizara virtualized | Vaovao IPhone
CloudOn: Birao virtoaly sy mpijery rakitra ho an'ny iPad
Efa nolazaiko volana vitsivitsy lasa izay ny fampiharana iray tena tsara hitantanana rakitra amin'ny iPad ary hampidinana rakitra mba hananana ny rakitra ato anaty rindranasa iray. Nantsoina ity fampiharana ity Documents, izay manana mpilalao mozika mitambatra miaraka amin'ny mpizahatany namboarina (koa) hampidina rakitra avy amin'ny pejin-tranonkala WWW.
Androany hiresaka momba ny CloudOn aho: "Office" virtoaly (ie Office amin'ny serivisy lavitra) miaraka amin'ny mpijery rakitra ary koa amin'ny serivisy lavitra. Avy amin'ny zavatra notsapaiko, ny serivisy dia ao amin'ny kinova Windows 2000 (Mbola tsy nitranga teo io) fa tontosa ny fiasa: vitantsika mamorona sy manova rakitra Office ary jereo ny sary, PDF ...
Rehefa misintona isika CloudOn, tsy maintsy manana kaonty ao amin'ny CloudOn isika. Raha manana ny fahazoana miditra amin'ilay rindranasa isika ary raha tsy izany dia mamorona kaonty izahay hiditra amin'ny sehatr'asa.
Rehefa tafiditra ao anatiny isika dia afaka ampifanaraho amin'ny rahona ny kaontinay CloudOn:
Mba hampifanarahana ny rahona dia safidintsika ny icono ary hanana ireto manaraka ireto isika:
Amin'ity tranga ity dia Google Drive izy ary mangataka ahy hiditra amin'ny angona Gmail-ko mba ahafahan'ny rahona roa mifangaro.
TANDREMO!: Tsy misy afa-tsy rahona tokana ihany no azontsika atao amin'ny fitantanana CloudOn. Izany hoe, rahona anaty rahona ihany no azontsika atao, nefa afaka manova ny rahona isaky ny maniry isika.
Vantany vao vita izay alefaso aminay ny rahona tsirairay, efa hanana ny rahona hampifangaroina izahay ary vonona hamorona ny antontan-taratasin'ny Office: Excel, Word ary Powerpoint.
Para mamorona, ohatra, a PowerPoint mankany amin'ny kisary «A"amin'ny menio ambony ary amin'ity tranga ity dia misafidy Microsoft Powerpoint izahay:
Misafidy anarana iray ho an'ny rakitra izahay ary manindry ny «vaovao".
Hifandray amin'ny mpizara lavitra any Windows 2000 (amin'ny tranga sasany) ny Office izay hiasantsika. Hanana an'ity kinova Powerpoint ity isika amin'ity tranga ity:
Hitanay amin'ny iPad amin'ny farany ny Office! Tena tsara izany satria ankoatry ny afaka dia mamela antsika mamorona sy manova ny fisie Office (Word, Excel, Powerpoint) ary afaka mamonjy azy ao anaty rahona isika mba hahafahantsika manondrana azy amin'ny Mac na PC antsika.
Etsy ankilany, mbola "hitsin-dàlana" io. Microsoft dia tsy maintsy miasa amin'ny Office for iPad, fa mandra-pahatongany dia heveriko fa miaraka amin'ny CloudOn dia handamina isika. Haingam-pandeha, maimaim-poana izany, ary mety tsy haharitra ela maimaim-poana satria mandoa vola ny mpizara virtoaly!
Fampahalalana bebe kokoa - Documents: mpitantana antontan-taratasy tena miasa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » CloudOn: Birao virtoaly sy mpijery rakitra ho an'ny iPad
Salama, haingana ve? Rehefa nanana izany tamin'ny iPad 3 aho dia miadana ...
Angel GF dia hoy izy:
Nandinika azy io nandritra ny andro vitsivitsy aho ary tena nanao tsara ...
Mazava ho azy fa misy ny olana fa Windows 2000 izy ireo ary indraindray "mihantona". Manàna faharetana ary mandrosoa miaraka amin'ny Biraonao.
Valiny amin'i Angel GF
FullScroll: afeno ny bara fitetezana (Cydia)
Ampandehano ny Wifi sy ny Bluetooth amin'ny maody fiaramanidina